Yaa yiri Adeer labada Sumuni shilling nooga dhig? | allsanaag
Yaa yiri Adeer labada Sumuni shilling nooga dhig?
17th May 2022 admin Category :
Yaa yiri Adeer labada Sumuni shilling nooga dhig?.
Dhowaan waxaanu qornay maqaal aanU cinwaan uga dhignay “Adeer labada Sumuni hal Shilin noga dhig. Maqaalkan ayaa waxa akhristay dad badab. Dadkii akhristay waxa ka mid ahaa goob joogayaal maalintaa fadhiyey meeshii hadalkani ku baxay.
Madasha la fadhiyey waxay ahayd beerta xoriyadda ee magalada Ceerigaabo. Ninka yiri ” Adeer labada Sumuni hal Shilin noga dhig. wuxuu ahaa cali Ciiro. Cali Ciiro maalintaa sida ay noo sheegeen goob joogayaak horay ayuu u sii raacay Madaxweyne Siyaad. Si uu goob joog uga noqdo wasiirka markii ugu horaysay reer Maakhir loo magcaabayo.
Siyaad Bare maalintaas waxa la socday oo Muqdisho ka wada yimaadeen Allah ha u naxariistee Maxamed Cabdi gaac oo ahaa taliyihii hogaanka ciidanka Booliiska Soomaaliyeed iyo Maxamuud Gacamey oo ahaa wasiir ku xigeen.
Xikmadaha reer Maakhir
← Multiple dead after shooting at Quebec City mosque, police say Suldaanka Maakhir iyo SNM →